देशको समृद्धिप्रति मधेशी युवाको आशंका | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » देशको समृद्धिप्रति मधेशी युवाको आशंका
देशको समृद्धिप्रति मधेशी युवाको आशंका
देशमा तीनैचरणको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनटै तह क्रियाशिल भइसकेको छ । नेपाल जनताले देखेको संघीय गणतन्त्रको सपना पूरा भएको छ तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन विषयमा कतै नकतै कमजोरी देखिएको छ । देशमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपनि शैली पुरानै रहेको छ । गणतन्त्र आएपनि त्यसको अनुभूति जनताले गरेको छैन बरु पीडा नै महसुस गरिरहेको छ । एकातिर महँगोले जनताको ढाड भाँचिएको छ भने अर्कोतिर जथाभावी कर लगाइएको छ । त्यो करले गर्दा अहिले संघीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खाडा भएको छ । अर्कोतिर दिनका दिन लाखौ युवा विदेश पलायन भइरहेको छ । युवाका लागि देशमा संघीयता नआएको जस्तो अनुभुती भइरहेको छ । युवालाई चाहिएको छ राम्रो शिक्षा र रोजगार । संघीय सरकारले त्यो दिन सकेको छैन । युवामा निराशा पनि त्यतिकै देखिएको छ । संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीपछि यहाँका युवाहरु निकै उत्साहित थिए । तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पनि पुरानै वेथिती कायम छ । देशमा परिवर्तन आएपछि देशमै रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर तराई मधेशको युवासँग संघीयतापछि जनताले कस्तो अनुभूति गरिरहेको छ त्यसमो युवाको कस्तो भूमिका छ लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । उहाँहरुसँग गरिएको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै ।
जाति विशेषका लािग आएका परिवर्तन
सदस्य, तराई मधेश राष्ट्रिय परिषष्द्
देशमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि शासन व्यवस्थादेखि अनेक संरचनामा परिवर्तन त भयो तर त्यसमा कुनै जाती र सुमदाय विशेषको हावी भयो । तल्लो तहका जनता, पिछडिएका समुदाय, दलित, मुस्लिम, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजातिले केही अनुभूति गरेको छैन । सुकिला मुकिला तथा हुने खाने अथवा कुनै जातीका लागि मात्र आएको जस्तो देखिन्छ । अर्थात संरचनामा परिवर्तन भएपनि लोकतन्त्रको प्रत्याभूतीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यसमा अझै एउटा जात र वर्गको पकड मात्र रहेको अनुभूती हामी युवाले गरिरहेका छौं । अहिलेको राजनीतिकबाट सार्वजनिक मुद्दा हराएको छ । युवाहरुमा व्यक्तिगत महत्वकाँक्षा बढेको छ । त्यस कारणले युवा कतै नकतै हराएको अवस्थामा पुगेको छ । मधेशका युवा कता कता अलमलिएको जस्तो देखिन्छ । अर्थात युवामा विश्वासनियताको संकट देखिएको छ । त्यहाँका युवाहरु सार्वजनिक महत्वको विषयमा भन्दा बढी आफूलाई ‘इगेंज’ गराउन चाहेका छन् । कहि नकही आफै ‘सेटल’ हुन खोजिरहेका छन् । सामुदायिकतामा संकट देखिएको छ । मधेशको क्रान्ति असफल भएको छ । क्रान्तिमा युवाको संलग्नता थियो तर त्यो असफल भएपछि त्यसबाट अवसरवादको जन्म भएको छ । र त्यही करणले अहिलेका युवाहरु अवसरको खोजीमा भौतिरिरहेका छन् ।
मधेशी युवा सोच्न बाध्य भएको छ
देशमा लामो संघर्षपछि ऐतिहासिक रुपमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ तर त्यसको फाइदा केही सिमित व्यक्तिले लिइएका छन्, जसको यो देशमा हाली मुहाली रहेको छ । यसलाई यसरी भनौ, जसले अवसर पाएका छन्, त्यसका लागि मात्र यो परिवर्तन आएको छ । जसले अवसर पाएको छैन उसले परिवर्तनको अनुभूति गरिरहेको छैन । अर्थात आमजनताले परिवर्तनको अनुभूति नै गरिरहेको छैन भनि प्रष्ट देखिन्छन् । गाउँगाउँ सिंहदरवारको नारा दिएर नेताहरु चुनाव जित्नुभयो । तर चुनावपछि त्यस्तो कुनै अनुभूति हुने गरि काम नगरेको खण्डमा जनताले त्यसको अनुभूति नगरेका हुनाले निराश बनेको छ । यो देशमा संघीयता आयो । त्यसपछि सविधान पनि निर्माण भयो । देशमा संघीयता आएपछि सविाधन निर्माण हुनुअघि जनता निकै खुशी थिए । तर सविधान निर्माण भएपछि सबै निराश भए । किनभने सोचेको जस्तो सविधान निर्माण भएन । अधिकार सम्पन्न सविधान निर्माण भएपछि देशमा समान अधिकार प्राप्त हुन्छ । त्यसबाट अवसरहरु पाइने भनि मधेशी जनताले सोचेका थिए तर त्यसको ठिक उल्टो भयो । संघीयतालाई काठमाडौको मस्तिष्कले अझै स्वीकार गरेको छैन । त्यही भएर अहिले त्यस्तो समस्याहरु उत्पन्न भएको छ । काठमाडौको मस्तिष्कबाट देश चलेको छ । त्यही भएर समस्या देखिएको छ । देशमा एउटा केन्द्र सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र थुप्रै स्थानीय सरकार छन् । अर्थात सरकारै सरकार छन् । तर अहिले पनि लोकसेवाको विज्ञापन केन्द्रबाट मात्र प्रकाशित हुने गर्छन् । प्रदेश सरकार गठन भइसकेको छ भने त्यहाँको युवाले आफ्नै प्रदेशमा आयोगको परीक्षा दिन पाउनुपर्ने दिन कहिले आउँछन् ? केन्द्रीय सत्ताको वरिपरी सबै कुरा रहनु थियो भने देशमा संघीयता किन आएको छ भनि मधेशका युवाहरु सोच्न बाध्य भएको छ ।
देशमा संघीयता आएको कुरा अनुभूति भइरहेको छ
सञ्चारकर्मी, जनता टेलिभिजन
देशमा संघीयता आएपछि युवाहरुले त्यसको अनुभूति गरिरहेको छ । युवाहरुले अवसर पाइरहेको छ । पहिला युवाहरु केन्द्रमा मात्र आश्रित थिए तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि अवसरहरु लिइरहेका छन् । थुप्रै नेताहरु अवसर पाएका छन् । कोही चुनाव जितेका छन् भने कोही कर्मचारी भएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्य अवसरको पनि सृजना भइरहेका छन् । पहिला एक ठाउँमा सरकार हुन्थ्यो अहिले सात ठाउँमा सरकार छन् । गाउँगाउँमा नगर नगरमा सरकार छन् । यसले पनि पक्कै पनि धेरैका लागि रोजगारको अवसर नै हो । यसले आउने दिनमा पक्कै पनि जनताको विकास कार्यमा र उनको सोचमा परिवर्तन ल्याउनेछ भनि मैले विश्वास लिएको छु । धेरै युवाहरु राजधानी छाडेर आफ्नो गाउँ ठाउँमा बस्न थालेका छन् । पहिला सबै अवसरमा केन्द्रमा केन्द्रित थियो । नेताहरु सबै केन्द्रमै हुन्थे । त्यसकै वरिपरी युवाहरु हुन्थे । तर अब त्यो अवस्था छैन । अब त प्रदेशमा मात्र होइन, गाउँ गाउँमा सरकार पुगेका छन् । अहिले देखिने गरि काम नभएको होस् तर जनताको बीचमा उपस्थिति देखाइसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा देशमा संघीयता आएपछि मधेशी जनता हेपिन छाडेका छन् । अब कुनै पनि मधेशीलाई मधेशी, मरसिया, धोती भनेर हेप्दैन । यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्छ । मधेशीले आफ्नो पहिचान पाएको छ । यो देशमा पनि मधेशी रहेको छ भने महसुश यहाँको शासकलाई भएको छ ।
नेपालका युवा हुँदैछन् पलायन
देशमा रुपमा परिवर्तन आएपनि सारमा आएको छैन । अर्थात बाहिर परिवर्तन जस्तो देखिएको छ । भित्र त्यस्तो परिवर्तन भएको छैन । रुपमा पटक पटक परिवर्तन भयो तर त्यसको फाइदा एलिट समूहले मात्र लिइरहेको छ । देशमा हुने परिवर्तनबाट तराई मधेशका युवाले निकै अपेक्षा गरेको थियो । तर ती युवाले समान्य सुविधा पाएको छैन । अहिले पनि शिक्षाको अवस्था त्यस्तै छ । वेरोजगारी अवस्था पनि त्यस्तै छ । विदेश जानेको सँख्यामा कमी भएको छैन । अहिले पनि शिक्षा लिनका लागि काठमाडौ नै आउन पर्छ वा ठूला ठूला शहरमै जानुपर्छ । यो कस्तो परिवर्तन हो भनि युवाहरु अन्योलमा छ । त्यो अन्योलले समाजलाई असुरक्षित बनाएको छ । र आफूलाई जहाँ सुरक्षित ठानिरहेका छन्, त्यही गइरहेका छन् । जुन देशका युवा आफूलाई असुरक्षित ठान्यो र विदेश पलायन भयो भने बुझ्नुस् त्यो देशको कल्याण छैन । नेपालका कुनै पनि युवा आफ्नो देशमा सुरक्षित ठानेको छैन । चाहे त्यो शिक्षा होस् वा रोजगार होस् । कुनै पनि क्षेत्रमा युवाले सुरक्षित ठानिएको छैन । एक त नेपालमा उच्च तथा प्राविधिक शिक्षाको राम्रो व्यवस्था नभएको कारण चाहिएको जनशक्ति छैन । तर, जजति छन् तिनीहरु पनि पलायन भइरहेका छ । त्यसलाई रोक्ने प्रयास कही कतैबाट भइरहेको छन् । विना जनशक्तिको देशलाई समृद्ध बनाउने सपना देखिरहेको छ ।
शिक्षाका लागि युवा भौतारिदै
अध्यक्ष, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ
युवालाई आफ्नो अनुकुलको शिक्षा चाहिएको छ । आफूले रोजेको अनुसार शिक्षा चाहिन्छ । र, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी पनि चाहिएको छ । तर देशमा यत्रो परिवर्तन हुँदा पनि नसुलभ शिक्षा पाइरहेको छ न रोजगारी नै पाइरहेको छ । अहिले पनि नेपालमा शिक्षा प्राप्त गर्नु निकै गाह्रो विषय भएको छ । शिक्षा महँगो त छ नै त्यसमा पनि पाउन गाह्रो छ । पैसा तिरेर पनि सुलभ ढंगबाट शिक्षा पाउन गाह्रो छ । देशको शिक्षा माफियाको कब्जामा छ र त्यसमा यस्तो मनमानी भइरहेको छ कि बाध्य भएर शिक्षाका लागि भएपनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । यहाँका विद्यार्थी बंगलादेश, चीन, भारत, अमेरिकालगायतका देशमा दुख गरेर भएपनि अध्ययनका लागि किन जान्छ त ? यदि नेपालमै त्यो अनुसारको शिक्षाको व्यवस्था भइ दिएको भए किन विदेश जानु पथ्र्यो । नेपालको शिक्षा यति महँगो छ कि भएका विद्यालय र क्याम्पसहरु राम्रोसँग सञ्चालनमा आएको छैन । युवाहरु शिक्षाका लागि यताउति भौतारिरहेका छन् । खासगरि मधेशमा शिक्षाको निकै अभाव छ । देशमा तीनवटा सरकार गठन भएको छ । सरकार गठन हुँदा जुन उत्साह थियो, त्यो कम हुँदै गइरहेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको छ तर त्यसलाई अधिकारविहिन बनाएको छ । केन्द्रले कुनै अधिकार नै दिएको छैन । अधिकार नदिएको कारण कुनै काम नै भइरहेको छैन । यदि काम गर्न पाएको छैन भने संघीयता आएको के अर्थ ? देशमा परिवर्तन आएपछि मधेशका मात्र होइन, सबै तिरका युवा निकै आशावादी भएका थिए । रोजगारीको वृद्धि हुन्छ र रोजगार पाउँछु भने आशा युवाहरुले गरेका थिए तर अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।
अपराधी मनोविज्ञानको विकास
देशमा गणतन्त्र आएपनि हामी जस्ता युवा व्यावसायीले अनुभव गर्न पाइरहेको छैन । मलाई सोध्नुहुन्छ भने पहिलाको अवस्था नै राम्रो थियो । कम से कम त्यतिबेला जनतामा अनुशासन थियो, प्रशासन थियो । एक अर्काको सम्मान हुन्थ्यो । अहिले त केही बाँकी छैन । जसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गरिरहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई न वडा अध्यक्षले टेरिरहेको छ न वडा अध्यक्षको कुरा गाउँपालिकाका अध्यक्षले मानिरहेको छ । त्यस्तै समस्यामा नगरमा छन् । विकासको नाममा यस्तो भ्रष्टाचार बढेको छ कि यस्तो पवित्र गणतन्त्रमाथि पनि घृणा शुरु भएको छ । गामघरमा जनतामा गणतन्त्र यस्तै हुन्छ भने छाप पर्दै गइरहेको छ । अधिकार दिएर मात्र हुँदैन । त्यसको सदुपयोग कतिको भइरहेका छ त्यो हेर्नुपर्छ । ल ठिक छ, पंचायतकालमा कुनै काम गर्न माथिबाट आदेश लिनु पथ्र्यो । जिविस धाउनु पथ्यो, जिल्ला पंचायत धाउनु पथ्र्यो । केन्द्रमा निवेदन चढाउनु पथ्र्यो तर अहिले सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ तर के ती अधिकार सबै प्रयोग भइरहेको छ त ? अधिकारको सदुपयोग भइरहेको छ ? पक्कै भइरहेको छैन । दुरुपयोग यस्तो भइरहेको छ कि सबै युवाहरु दुरव्यसनीमा फँसीसकेको छ । मोवाइल, मसल, मासु, मनी, मोटरसाइकलमा युवाहरु फँसिसकेका छन् । एक चोक्टा मासु र एक घुटको रक्सी खान दियो भने अहिलेको युवाहरु जे पनि गर्न तयार हुने अवस्था सृजना भइसकेको छ । स्थानीय स्तरका अधिकाँश युवामा अहिले विदेश जाने कि स्थानीय प्रतिनिधिको पछि पछि हिड्ने दिनचार्या बनेको छ । यसले एक त देशको जनशक्ति बर्बाद भइरहेका छ भने अर्कोतिर अपराधी मनोविज्ञानको विकास भइरहेको छ ।
युवाको समस्या सम्बोधन नभए सम्हाल्न मुस्किल
गणतन्त्र ल्याउन लामो संघर्ष गर्नु पर्यो । यसलाई त राम्रो भन्न सकिदैन तर यो अझै व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन भनि चिन्ताको विषय बनेको छ । हामी युवाले यो सुधार होला भनि सोचेर बसेका छौं तर यो सुधार हुनुको सट्टा झन दिनदिनै विग्रिदै गइरहेको छ । यसले चिन्ता बढाएको छ । गणतन्त्रमा आफै निकै महत्वपूर्ण चिज हो । जनताका लागि विश्वमा यो भन्दा राम्रो प्रणाली हुनै सक्दैन । विश्वमा यो सफल भएको प्रणाली हो तर विश्वमा कसरी सफल भएको छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा गणतन्त्र कसरी सफल भयो र यहाँ कसरी असफल हुँदैछ त्यो कुराको लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने देशमा गणतन्त्र आएको १० वर्ष नै भइसक्यो । गणतान्त्रिक सविधान जारी भएको झण्डै तीन वर्ष । यति बेलासम्ममा सबै कुरा ट्रयाकमा आइसक्नुपर्ने थियो । त्यस्तो देखिएका छैन । युवाको कुरा गर्ने भने युवाले नै देशमा गणतन्त्र ल्याएको हो, यसका लागि रगत बगाएको हो तर अहिले युवालाई नै त्यसप्रति वितृष्णा शुरु भएको छ । जुन उद्देश्यका साथ, जुन सोचका साथ यत्रो लडाई गरेर देशमा संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याए त्यसको अनुभूति गर्न पाइरहेको छैन । डाडु पेन्यु हातमा लिएकाहरु मौजमस्ती गरिरहेका छन् भने अर्कोले मुख ताकेर बसेका छन् । युवामा निराशा उत्पन्न भएको छ । जुन प्रकारको निराशा उत्पन्न भएको छ त्यसले कसैलाई भलो गर्नेछैन । यसलाई समयमा बुझेर सम्बोधन गर्न सकिएन भने पछि सम्हाल्न गाह्रो हुनेछ ।